IMac mini ene-M1 yiprosesa eyinhloko eyodwa esheshayo | Ngivela kwa-mac
IMac mini ene-M1 yiprosesa eyinhloko eyodwa esheshayo
Ngemuva kwalokho ukwethulwa kwama-Macs amasha nge-processor M1 (I-Apple Silicon) lapho ephepheni, iyashesha ngendlela emangalisayo, inamandla, iyaqhubeka futhi ihlala isikhathi eside, saqala ukuthola izivivinyo ezenziwa ngabantu besithathu. Ngalesi sikhathi, sigxila esivivinyweni esenziwe yi-geekbench kuma-processor we-single-core. Impendulo isobala. IMac mini ene-M1 iyashesha kakhulu.
U-Apple ukwenzile futhi. NgoJuni uTim Cook umemezele ukuthi ekupheleni konyaka, i-Apple izobeka i-Intel eceleni ukugxila kubaprosesa bayo. NgoNovemba 10, ama-M1 amasha athulwe emphakathini. Ukuhlolwa okwenziwa nguGekbench khombisa ukuthi i-2020 Mac mini ene-M1 chip iyashesha kunanoma iyiphi i-Intel-powered Macs. Ukuhlolwa kwenziwe amaprosesa ayisisekelo oyedwa futhi ngaphandle kokuthi ukuqhathanisa sekwenziwe ngaphansi kwe-Rosetta 2 emulator.
Njengoba kungabonakala esithombeni esingenhla, iMacBook Pro neMacBook Air ene-M1 isendaweni yesibili neyesithathu. Manje, kufanele sicabangele idatha eshiwo ngenhla. Izivivinyo zenziwe kusetshenziswa i-Rosetta 2 emulator egijima ikhodi ye-x86. Lokho kusho ukuthi kubonakala kufinyelela phakathi kuka-78% no-79% wokusebenza kwekhodi yomdabu ye-Apple Silicon. Noma kunjalo, imiphumela ikhona futhi njengedatha emangalisayo kungabonakala ukuthi idlula i-2020 iMac nge-Intel Core i9-10910 ku-3.6GHz.
Le datha ibaluleke kakhulu. Kungashiwo ukuthi njengamanje kuma-processor we-single-core, i-M1 ayinakulinganiswa. Enye into ehlukile uma senza isivivinyo ngama-processor amaningi. Lapho ngokwesibonelo, kubukeka ngokusobala i-Mac Mac ka-2019 ihamba phambili emashadi, Futhi iM1 mini enikwe amandla iMac mini yehlela ku-13 ngemuva kwamanye amamodeli we-Mac Pro, amamodeli we-iMac Pro ne-iMac ngasekupheleni kuka-2019.
Iqiniso elizokwenza labo abasetshenzisiwe ingcebo enkulu ku-Pro, akhululeke kancane. Uma kungenjalo…
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Amakhompyutha we-Mac » Mac Mini » IMac mini ene-M1 yiprosesa eyinhloko eyodwa esheshayo
I-Adobe isivele ine-beta yokuqala ye-Photoshop etholakalayo yama-Macs enama-processor we-ARM
Ama-unboxings okuqala e-Apple Silicon aseqala ukuvela